China Bio-based 1, 4-butanediol (BDO) Nrụpụta na Factory | Asụsụ Landian
Bio nke dabeere na 1,4- butanediol (BDO)
Usoro Molekụl: C4H10O2
Molekụla ibu: 90.12
Njirimara:Ọ bụ enweghị mmiri na viscous mmanu mmanu mmiri. Ebe nkwenye bụ 20.1 C, ebe mgbaze bụ 20.2 C, ebe ọkụ bụ 228 C, njupụta metụtara bụ 1.0171 (20/4 C), na ntụgharị ntụgharị bụ 1.4461. Ihe ngosi Flash (iko) na 121 C. Soluble na methanol, ethanol, acetone, ntakịrị soluble na ether. Ọ bụ hygroscopic ma na-enweghị isi, ebe ọnụ ụzọ ya dịtụ ụtọ.
Uru: 1,4-butanediol nke sitere na bio sitere na bio-based succinic acid site na esterification, hydrogenation, nzacha na usoro ndi ozo na ihe di ndu bio-carbon kariri 80%. Prọtị ndị nwere ike ire ere dị ka PBAT, PBS, PBSA na PBST iji 1,4- butanediol dị ka akụrụngwa bụ plastik na-emebi emebi, nke na-agbaso usoro biomass na mba dị iche iche.
1,4- butanediol (BDO) bụ ihe dị mkpa dị mkpa na kemịkal kemịkal. A na-ejikarị ya eme ihe na ngalaba ọgwụ, ụlọ ọrụ kemịkalụ, akwa, ịkpa akwụkwọ, akwụkwọ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ kemịkalụ kwa ụbọchị. Ọ bụ isi akụrụngwa maka imepụta polybutylene terephthalate (PBT) plastik injinia na PBT fiber. Ọ bụ akụrụngwa dị mkpa maka nrụpụta plastị biodegradable PBAT, PBS, PBSA, PBST na na.
Nke gara aga: bio-based succinic acid / amamịghe nke bio
Osote: Bio-based sodium succinate (WSA)